Ndị dọkịta UK kwupụtara mkpebi iwepụ ihe mgbochi niile COVID-19 na July 19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » Ndị dọkịta UK kwupụtara mkpebi iwepụ ihe mgbochi niile COVID-19 na July 19
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Ezighi ezi uche na uche na-adịghị: Ndị dọkịta UK na-ekpebi mkpebi iji bulie mgbochi niile COVID-19 na July 19
Ndị dọkịta UK kpọrọ ya Unethical. Site na ọnụọgụ nke ọhụụ ọhụrụ COVID-19 na-ebili ngwa ngwa yana ọgwụ mgbochi na-enyebeghị ọgwụ mgbochi, ndị ọkachamara ahụike na ndị sayensị dọrọ aka na ntị na ịkpọghe England na July 19 bụ "akaghi aka".
Obodo UK dị maka "oge ọkọchị ọgba aghara na ọgba aghara" dịka atụmatụ imeghe abụghị "akpachara anya", ma ọ bụ "achịkwa".
Mkpebi Mịnịsta Ala Boris Johnson imepe bụ “ihe dị egwu na akaghi aka”, leta ahụ kwuru, yana “enweghị ụkpụrụ na ọgụgụ isi”.
E dekọtara ihe karịrị ọrịa 32,500 na July 7 n'ofe UK - ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke mba ahụ kemgbe Jenụwarị.
N'akwụkwọ ozi ọha, akpọrọ "Memorandum Against Mass Ofufe Ọrịa", ihe karịrị 100 ndị dibia bekee na ndị dibia sayensị katọrọ UK Mkpebi gọọmentị iwepụ ihe mgbochi niile COVID-19 na England na July 19 dị ka "enweghị ụkpụrụ".
E bipụtara akwụkwọ ozi ahụ ihe karịrị otu narị ndị ọrụ ahụike depụtara ma binye aka na ya ụnyaahụ na ngalaba mmekorita nke akwụkwọ akụkọ ahụ bụ The Lancet medical medical.
Site na ọnụọgụ nke ọhụụ ọhụrụ COVID-19 na-ebili ngwa ngwa yana ọgwụ mgbochi na-enyebeghị ọgwụ mgbochi, ndị ọkachamara ahụike na ndị sayensị dọrọ aka na ntị na ịkpọghe England na July 19 bụ "akaghi aka".
N'ime 32,500 na-efe efe e dere na July 7 gafee UK - ọnụ ọgụgụ kasị elu nke mba ahụ kemgbe Jenụwarị.
Nyere na UK ugbu a na nsogbu nke nnabata nke ikpe ọhụrụ, Mkpebi Mịnịsta Ala Boris Johnson ịkpọghe bụ "ihe dị egwu ma akaghi aka", akwụkwọ ozi ahụ kwuru, yana "enweghị ụkpụrụ na ọgụgụ isi".
Ndị ọrụ ahụ na-agbaso nkwupụta sitere na onye nlekọta ahụike UK a họpụtara n'oge na-adịbeghị anya, Sajid Javid, onye kwuru ụbọchị ole na ole tupu ọrịa ọkọchị nwere ike iru 100,000 kwa ụbọchị.
Akwụkwọ ozi ahụ dọrọ aka na ntị na agbanyeghị na agbachila ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị bi na ya, na 86.4% anatala ọgwụ mbụ ha na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 65% na-agbachapụkarị ọgwụ mgbochi, eruteghị ọgwụ mgbochi, ọ gaghị abụ site na July 19. Akwụkwọ ozi ahụ kwukwara ihe ize ndụ nke 'ogologo COVID' nke ndị ọrịa nwere ike ịta ahụhụ mgbe nje ahụ gasịrị. Ogologo COVID bụ ọnọdụ nke ụfọdụ ndị ọrịa coronavirus na-enweta na mbido ọrịa mbụ ma nwee ike igosipụta nsogbu iku ume, enweghị isi na uto, na ike ọgwụgwụ.